Arrimaha Somaliland Halkay ku Biyo Shuban Doonaan? • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Arrimaha Somaliland Halkay ku Biyo Shuban Doonaan?
February 20, 2020 | Published by: dawlad
Maalmahan soosocda waxaan dhowr maqaal oo taxane Afsomali ah idin kula qaybsan doonaa qadiyada balaadhan iyo dooddaha ku xeeran qadiyada Somaliland. Arimaha aan qaadaa dhigi doono waxa ka mid ah:
1. Soomaaliland ma iyada oo dal gaar ah oo ictraaf leh ayey Soomaliya ku biirtay?
2. Ma waxaa jiray, sida Axmed Samatar idaacadaha ka yidhaa, 40 dal in ka badan oo aqoonsay Somaliland June 1960, mise waa sheeko baraley?
3. Isu taga labadda waxood goormuu dhacay, haduu dhacayse Soomaaliland halkay ku dambeysay?
4. Fakirka ah in Soomaaliland ka go’do Soomaali Republic ma wax uu curtay 1988 mise fakirkaas mudo dheer ayuu jiray?
5. Aduunku sideebuu u maarayn karaa arinta huracan ee banjartay.
Arimahaas iyo xeeladaha taariikheed ee ku weegaaran ayaan isku dayi doonaa si taariikhi iyo political ecconomy ah bal in aan ifiyo.
Maanta wafdi Itoobiyaan ah ayaa ergo ahaan Hargeysa u yimid.
Arintani in Itoobiya soo dhexgasho, maanta uu R/W Abiy gacanta ku hayo ugu ma horeyso. Xiliyadii 1950hii markii Somaaliya xoroobi rabtay Boqor Xayle Selaase waxa uu geed gaaban iyo ku dheerba u fuulay in uu is-hortaago xornimadii xiligaas muuqatay.
Xoogagii wadaniga markuu caabin kariwaayey, waxa uu isku dayey in uu AUN Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal qalbigiisa badalo. Bilihii ka horeeyey June 1960, Xayle Selassie waxa uu dowr jeer Addis Ababa ugu yeedhay AUN Cigaal.
Dagaalkii dhexmaray labada beelood ee Soomaaliyeed ee Sacad Muuse iyo Arab (1960hii) waxa dabka shidayey hal dhinacna hubka siinaaysey Itoobiya.
Sikastaba ha ahaateeb1994, xiligii Meles Itoobiya Madexweynaha ka ahaa, faraha ayuu aad ugula jiray arinta Soomaaliya. Inkasta uu odhan jiray midnimada Soomaaliya ayaan jeclahay, hadana hoosta wuu ka duraayey.
AUN Abdimajiid Xuseen, oo aad Meles ugu dhawaa, ayaa 1994 wargeys la odhan jiray Qandhi Afriq (Horn Africa) u sheegay in AUN Cigaal Males u soo jeediyey hindisaha ah in uu Soomaaliland la mideeyo Itoobiya (Xiligaas maqaal ayaan arintan ku aadan ku daabacay The Ethiopian Review Magazine).
Arintaas Meles waa u qushuucy. Laakiin waxa uu ku jawaabay sidan: Madexweyne waxaan midobaynaa – waa Itoobiya iyo Soomaaliya- marka Soomaali nabadowdo eed mid noqotaan.
Tolow barnaamijka hada R/W Abiy iyo M/W Farmaajo wadaan makii xiliyadii 1994tii AUN Cigal hindisee Melesna balaadhiyey baa?
La arki doone! Sikastaba ha ahaatee, qadiyada Soomaaliland weli ma dhowa.
Waxaanayse inaba ka fursanayn wadda hadal taariikh ku dhisan oo Soomaali iyadu si gaar ah u wada hadasho.
Waa Bilaahi Towfiq